TANTARANAY | Zhejiang Liper Lighting Technology Co., Ltd.
Fahazavana LED Bay Bay avo
Jiro - Mamiratra, mampanantena
Tsy azonao an-tsaina mihitsy izay hitranga raha tsy misy hazavana eto an-tany
Mbola mitsapatsapa ao anaty haizina ny olombelona
Ny faniriana sy ny fikatsahana hazavana dia azo averina amin'ny angano grika - Ny lelafo Prometheus
Amin'ny 21 Oktobra 1879
Nanova ny angano ho tena zava-misy i Edison, nitondra tena hazavana
Onanoratra vanim-potoana vaovao ho an'ny tantaran'ny siansa sy ny olombelona manontolo
Mandritra izany fotoana izany dia tonga ny tantaran'i Liper
Manaraka ny fomba fanamboarana henjana sy avo lenta, ny orinasa dia manome lanja lehibe ny laza sy ny kalitao. Ny vokatra lehibe rehetra dia nandalo IEC, CB, CE, GS, EMC, TUV, EMC, LVD ary ERP fanamarinana iraisam-pirenena ary fanamarinana CQC sy CCC Sina nasionaly. Ny famokarana rehetra dia tanterahina mifanaraka amin'ny ISO9001: 2000 International Quality System.Sy orinasa dia nanangana ivon-toerana teknolojia R&D sy laboratoara avo lenta. Izy io dia manana ekipa R&D manokana ary nahazo karazana patanty isan-karazany, ao anatin'izany ny patanty 12 ho an'ny famoronana, patanty 100 ho an'ny fampiasana, ary patanty 200 ho an'ny famolavolana. Manomboka amin'ny famokarana, R&D ka hatramin'ny fanavaozana, nanjary mpitarika ny indostrian'ny jiro izy ary namidy erak'izao tontolo izao, ny vokatra dia mankafy ny lazany eo amin'ny mpanjifa. Ny mpitarika ny orinasa dia niaraka tamin'ny filoham-pirenena sinoa hitsidika ireo firenena eoropeanina imbetsaka ary nanao fifampiraharahana momba ny fandraharahana hiresaka momba ny fampandrosoana ny indostria.
Amin'ny maha orinasa jiro malaza manana marika malaza dia iray amin'ireo mpilalao manan-danja indrindra izahay izay mitarika ny làlan'ny indostrian'ny jiro sinoa .Miorina amin'ny etsy ambony, nahazo ny booth marika marobe izahay tao amin'ny foibe kanto ary naharitra 10 taona mahery.
Amin'ny 2015, Ity dia tonga ny fotoana iray.
Tamin'ny alàlan'ny fanatontosana tamin'ny fomba ofisialy ny fiaraha-miasa stratejika tamin'ny Desambra 2015 rehefa nanao sonia ny fifanarahana fiaraha-miasa stratejika eo amin'ny mpitarika ambony ny orinasa Alemanina sy ny solontenan'ny mpiara-miasa sinoa ao Alemana, Alemana Liper Electric Co., Ltd miaraka aminay dia nanao fiaraha-miasa rehetra, nanamarika ny dingana vaovao amin'ny fampandrosoana an'i Liper. Manomboka mandehandeha ny mpitatitra fiaramanidina amin'ny indostrian'ny jiro iraisam-pirenena ......
Hampifangaroinay tanteraka ny teknolojia indostrialy avo lenta Alemanina ary hanatsarana ny fanahin'ny Alemanina hahazoana fahombiazana amin'ny fampivoarana sy ny fampandrosoana maharitra, mba hanomezana vahaolana vahaolana jiro voalohany ho an'ny jiro ara-barotra manerantany, jiro anaty trano ary jiro ivelany. Tsy fanitarana ny lamina stratejika amin'ny lafiny roa fotsiny izany, fa ny lamina sy ny paikadim-piaraha-miasa vaovao dia hitondra fiatraikany lehibe amin'ny indostrian'ny jiro LED.
Nanao voninahitra tsy tambo isaina izahay, fa ny tanjona vaovao sy tsara kokoa ary tsara kokoa no tanjontsika tsy misy fijanonana.
Liper dia manolo-tena hampiroborobo ny fomba fiaina maitso, mirindra ary ambany karbaona, mamorona tontolo hazavana avo lenta ho an'izao tontolo izao, ary manazava isan'andro isan'andro ho an'ny rehetra!
Ny jiro jiro dia mamafy amin'ny tany mavo ary mamela ny olona hankasitraka ny kristaly amin'ny haitao sy haitao siantifika.
Ny bibilava dia mahatonga izao tontolo izao hitahiry angovo bebe kokoa !!!
Albrechtstraße 131, 12165 Berlin, Alemana
IP 65 DownlIGHT Safidy tonga lafatra ho an'i Parkin ...
Ny hery, fitiavana, fisakaizana avy amin'ny beau ...
© Zon'ny mpamorona - 2020-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Tohana ara-teknika: